Wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato sharciyada socdaalka UK 2022
November 29, 2021 Okpara Francis
Wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato sharciyada socdaalka UK
Waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato nidaamka cusub ee socdaalka
Laga bilaabo bilawga sanadka 2021, muwaadiniinta EU-da ee aan hore u deganayn Boqortooyada Midowday (UK) waxaa loola dhaqmay si la mid ah sida aduunka intiisa kale. Qof kasta oo raba inuu ku noolaado kana shaqeeyo Boqortooyada Ingiriiska waa inuu soo gudbiyaa codsi ku salaysan nidaamka dhibcaha.
Si aad wax badan uga ogaato nidaamka dhibcaha, waxaad la xiriiri kartaa Qareenka socdaalka london. Khubarada ayaa ku caawin kara inta lagu jiro nidaamka socdaalka oo dhan.
Qorshaha Shaqaalaha Beeraha ee xilliyeedka ayaa la eegayaa si loo eego in wax laga beddelo loo baahan yahay. Barnaamijku wuxuu ku salaysan yahay kootada u oggolaanaysa beeralayda inay shaqaale ka qaataan dalal kale. Muddadu waa ilaa 6 bilood.
Sababaha isbeddelka socdaalka UK
Muwaadiniinta wadamada Midowga Yurub waxay heleen xuquuq toos ah oo ay kaga shaqeeyaan Boqortooyada Ingiriiska markii UK ay xubin ka ahayd Midowga Yurub. Mawduuca ugu weyn ee ololaha 2016 wuxuu ahaa xakamaynta socdaalka, oo loo yaqaan 'Leave'. Dhibcaha waxaa loo adeegsadaa nidaamka fiisaha shaqada ee cusub. Muwaadiniinta Irishka waa laga dhaafay, maadaama qayb ka ah Aagga Safarka Guud, ay weli ku noolaan karaan kana shaqayn karaan UK.
Hababka abaal-marinta dhibcaha
Soogalootiga doonaya inay u haajiraan UK waxay u baahan doonaan inay dhaliyaan 70 dhibcood si ay ugu qalmaan fiisaha. Mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu kasbado 50 dhibcood waa inaad ka hesho shaqo shaqo bixiye la ansixiyay markaad si fiican u taqaanid Ingiriisiga. Haddii codsadaha la siiyo ugu yaraan £25,600 sannadkii, waxay kasban karaan 20 dhibcood ee soo hadhay.
Aqoonta waxbarasho waxay heli kartaa dhibco gunno badan. PhD-da ku habboon waxay ku heli doontaa 10 dhibcood. Waxa kale oo aad ku kasban kartaa 20 dhibcood PhD xagga Tignoolajiyada, sayniska, xisaabta ama injineernimada. Xitaa haddii mushaharku yar yahay, haddii ay helaan shaqo shaqo halka UK ay u baahan tahay shakhsiyaad, waxay heli karaan ilaa 20 dhibcood.
Xitaa haddii mushaharka sannadlaha ahi uu ka yar yahay £25,600, shaqooyinka caafimaadka iyo waxbarashada qaarkood waxay ku kacayaan 20 dhibcood.
Codsiga shaqada ee Boqortooyada Midowday
Inkasta oo dadka qaar laga yaabo inay u baahdaan inay aadaan goobta codsiga fiisaha si ay u xaqiijiyaan aqoonsigooda oo ay u gudbiyaan waraaqaha muhiimka ah, kuwa kale waxay awoodi doonaan inay codsigooda internetka ku bilaabaan. Tusaalooyinka dukumeentiyadani waa warqad kafaala-qaad ah oo ka timid shirkad UK ah oo suurtogal ah iyo caddaynta aqoonta Ingiriisiga.
Qiimaha codsiga waxa lagu go'aamin doonaa muddada uu shaqo-doonuhu qorsheynayo inuu ka shaqeeyo Boqortooyada Midowday (UK) iyo haddii xirfaddoodu ay ku jirto liiska xirfadda gaaban ee gudaha UK, sida dhakhaatiirta xoolaha iyo naqshadeeyayaasha shabakada. Qiimaha caadiga ahi wuxuu u dhexeeyaa £610 ilaa £1,408 qofkiiba haddii aanay awooddoodu liiska ku jirin. Musharixiinta shaqadu waa inay sidoo kale bixiyaan £ 624 qofkiiba kharashka caafimaadka marka ay dalbanayaan fiisaha, taas oo dib loo soo celin doono haddii codsiga la diido. Waxa kale oo muhiim u ah inay soo bandhigaan caddaynta dhaqaalaha ay naftooda ku maareyn karaan bil kasta taasoo ah ku dhawaad ​​£1,270.
Caafimaadka iyo waxbarashada
Dhakhaatiirta iyo xirfadlayaasha kale ee daryeelka caafimaadka waxay codsan karaan fiisaha degdega ah. Kuwa xaqa u leh fiisahan waxay bixin doonaan kharashyo ka jaban waxaana lagu caawin doonaa inta lagu jiro nidaamka codsiga. Lacagta caafimaadka socdaalka laguma dabaqi doono codsade guulaysta. Codsadayaasha qaada dariiqan waa inay wali buuxiyaan shuruudaha mushaharka, kuwaas oo ku kala duwan nooca shaqada ay qabtaan. Si kastaba ha ahaatee, daryeeleyaal badan ayaa laga saari doonaa barnaamijka.
Wax ku dhigashada Boqortooyada Midowday
Ma jiri doonto xannibaadyo tirada ardayda caalamiga ah ee wax ku baran karta UK. Waxay codsan karaan lix bilood ka hor inta uusan barnaamijkoodu bilaabmin haddii ay ka soo dalbadaan meel ka baxsan Boqortooyada Midowday (UK) iyagoo isticmaalaya habka cusub ee codsiga fiisaha ardayga. Dawladdu waxa ay sidoo kale soo bandhigtay fiisaha qalin-jabinta, kaas oo u ogolaanaya ardaydu in ay joogi karaan UK laba sano ka dib marka ay qaataan shahaadada. Shakhsiyaadka dhammaystay PhD, tani waxay kordhin doontaa ilaa saddex sano.
Muwaadiniinta EU, EEA, iyo Swiss, iyo sidoo kale muwaadiniinta wadamada kale ee fiisaha laga dhaafo, uma baahna fiisaha si ay u booqdaan UK ilaa 6 bilood. Qorshaha Dejinta EU wuxuu diyaar u yahay dadka degan EU ee ku noolaa UK ka hor dhamaadka 2020. Waxay haysteen ilaa Juun 30, 2021, si ay u dalbadaan xaalad degenaansho, laakiin dawladdu waxay ku dhawaaqday inay wali tixgelin doonto codsiyada kuwa bixin kara sabab sharci ah oo dib u dhac ku yimid.
Xirfadlayaasha qaarkood, fiisooyinka sida Talent Global, Innovator, iyo fiisooyinka bilawga sidoo kale waa la heli karaa. Marka loo eego dowladda, tan waxaa loola jeedaa in lagu soo jiito "dadka leh karti aan caadi ahayn ama karti xagga injineernimada, sayniska, tignoolajiyada, ama dhaqanka." Waxa ay sidoo kale cusboonaysiinaysaa sharcigeeda magangalyada xilligan. Dhammaan muhaajiriinta doonaya inay sababo kale u booqdaan UK waa inay marka hore codsadaan oggolaansho.
Previous Post:La-taliyayaasha Ogolaanshaha Kulliyada ee ugu sarreeya ee la shaqaaleysiiyo 2021
Post Next:Barashada sida wax loo barto: Sida loogu guuleysto kulliyadda